Kabala Halluumul'isa ykn dhoksa. Gabatee halluu agarsiifamee fooyyeessuu ykn jijjiiruuf Dhangii - Bal'ina fili, ittaansuudhaan cancala Halluuwwan irraa cuqaasi.
Mul'annoo - Kamshaalee - Kabala HalluuFili
Halluu fayyadamuu barbaaddee cuqaasi. Halluu guutuu wanta faayilii ammee keessaa jijjiiruuf, wanta fili, ittaansuudhaan halluu cuqaasi. Halluu sararaa wanta filatamee jijjiiruuf halluu mirga cuqaasi. Hallu barruu wanta barruu keessaa jijjiiruufwanta barruu fili, ittaansudhaan halluu cuqaasi.
Dabalataanis halluu kabala Halluu irraa harkisuu fi isliiyidii kee irraa wanta fakkasa irraa buusuu dandeessa.
Kabal Halluu garagara baasuuf bal'ina xiilloo kamshaa irratti cuqaasi, ittaansuudhaan harkisii Kabala Halluu deebisunii walqbsiisuuf, kabala mataduree kamshaa gara qarree foddaatti harkisi.
Title is: Kabala Halluu